Yintoni yovavanyo lwe-ACT? Inkcazo, iMbali kunye neNkcazo
Funda ngo MTHETHO nendima edlala kwi-College Admissions
UMTHETHO (okokuqala uvavanyo lwe-American College) kunye ne- SAT ziimvavanyo ezi-standard ezifunyenwe yiikholeji ezininzi kunye neenyuvesi ukwenzela iinjongo zokwamkelwa. Olu vavanyo lunamacandelo amanqaku amanqaku akhethiweyo ahlanganisa izibalo, isiNgesi, ukufunda kunye nesayensi. Kwakhona unokuhlolwa kokubhala okukhethwa kukho okukhethiweyo apho uhlola isicwangciso kwaye ubhale inqaku elifutshane.
Uvavanyo lokuqala lwadalwa ngo-1959 nguprofesa kwiYunivesithi yase-Iowa eyayifuna enye i-SAT.
Olu vavanyo lwaluhluke ngokwenene kune-SAT ngaphambi ko-2016. Nangona i-SAT izama ukuvavanya ukufaneleka komfundi-oko kukuthi, abafundi bakwazi ukufunda - UMTHETHO wawuninzi kakhulu. Uvavanyo lwavavanya abafundi kwiinkcukacha abaye bafunda esikolweni. I-SAT yayiyiyo (ngokungafanelekanga) eyenzelwe ukuba ibe ngumviwo apho abafundi bebengakwazi ukufunda. UMTHETHO, ngakolunye uhlangothi, uvavanyo luvuze umgangatho wokufunda kakuhle. Namhlanje, ngokukhutshwa kwe-SAT entsha ngo-Matshi ka-2016, iimvavanyo ziyafana ngokufanayo kwimiba yomibini yokuvavanya abafundi abafunda esikolweni. IBhodi yeKholeji yavuselela i-SAT, ngokwengxenye, kuba yayilahlekelwa isabelo semarike kwi-ACT. UMTHETHO ukwedlula i-SAT kwinani labathengi-vavanyo ngo-2011. Impendulo yeBhodi yeKholeji yenze ukuba i-SAT ibe yinto efana noMthetho.
Yintoni UMthetho uVimba?
UMTHETHO wenziwe ngamacandelo amane kunye novavanyo lokubhala ngokuzikhethela:
UMTHETHO Uvavanyo lweNgesi: imibuzo engama-75 ehambelana nesiNgesi.
Izihloko ziquka imithetho yeziphumlisi, ukusetyenziswa kwegama, ukwakhiwa kwezivakalisi, intlangano, ubumbano, ukhetho lwegama, isitayela kunye neetoni. Ixesha elipheleleyo: 45 imizuzu.
UMTHETHO Uvavanyo lweMathematika: Imibuzo engama-60 ephathelene nezibalo zezikolo eziphakamileyo. Izihloko ezibandakanyiweyo ziquka i-algebra, i-geometry, imanani, imodeli, imisebenzi kunye nokunye.
Abafundi bangasebenzisa i-calculator, kodwa uvavanyo luyilwe ukwenzela ukuba i-calculator ayimfuneko. Ixesha elipheleleyo: imizuzu engama-60.
UMTHETHO Uvavanyo lweMithetho: Imibuzo engama-40 igxile ekuqondeni ukufunda. Abaza kuhlola abaza kuphendula imibuzo malunga neentetho ezicacileyo kunye neengxelo ezicacileyo ezitholakala kwiindinyana ezisemgangathweni. Ixesha elipheleleyo: imizuzu engama-35.
UMTHETHO Uvavanyo lweSayensi: imibuzo engama-40 enxulumene nesayensi yesendalo. Imibuzo iza kubhala i-biology ye-intro, i-chemistry, isayensi yesayensi kunye ne-physics. Ixesha elipheleleyo: imizuzu engama-35.
UMTHETHO Uvavanyo lokubhala (Okokuzikhethela): Abafundi abavanya ukuhlola baya kubhala isicatshulwa esisodwa esekelwe kwimiba enikwe. I-essay prompt iya kunika iingcamango ezininzi malunga nombono oza kuhlolwayo oya kuwufuna ukuhlalutya nokuvelisa aze abone indlela yakhe. Ixesha elipheleleyo: imizuzu engama-40.
Ixesha elipheleleyo: 175 imizuzu ngaphandle kokubhala; Imizuzu engama-215 kunye novavanyo lokubhala.
Uphi umThetho odume kakhulu?
Ngaphandle kwemibandela embalwa, umThetho uthandwa kwiindawo eziphambili zaseUnited States ngelixa i-SAT ithandwa kakhulu ngasempuma nasentshonalanga. Ukungafani kumgaqo yi-Indiana, eTexas, naseArizona, yonke into ene-SAT yokufumana iimvavanyo ngaphezu kwe-ACT--takeers.
Amazwe apho uMTHETHO uvavanyo oludumileyo (cofa kwigama likarhulumente ukuze ubone amanani esampula sokwamkelwa kwiikholeji kwimeko): Alabama , Arkansas , Colorado , Idaho , Illinois , Iowa , Kansas , Kentucky , Louisiana , Michigan , EMinnesota , eMosissippi , eMissouri , eMonty , naseNebraska , eNevada , eNew Mexico , eNorth Dakota , eOhio , e- Oklahoma , eMzantsi Dakota , eTennessee , e- Utah , eWest Virginia , eWisconsin , eWinternet .
Gcina ukhumbule ukuba nayiphi na isikolo esivumayo umThetho ufumana izikolo ze-SAT, ngoko ke apho uhlala khona akufanele kube yinto ebalulekileyo ekufuneka uyenze. Endaweni yoko, qalisa ukuhlola iimvavanyo ukuze ubone ukuba izakhono zakho zokuthatha iimvavanyo zilungele kangcono i-SAT okanye UMTHETHO, uze uthathe uvavanyo olukhethayo.
Ngaba Ndifuna Ukufumana Umgangatho Ophezulu kuMthetho?
Impendulo yalo mbuzo kukuba, inyaniso, "kuxhomekeke." Leli lizwe linamakholeji ahlolisayo-ayingekho i- SAT okanye i-ACT amanqaku kuwo onke, ngokucacileyo unako ukungena kule kholeji nakwiiyunivesithi ezisekelwe kwingxelo yakho yezemfundo ngaphandle kokuqwalasela amanqaku okuhlolwa okulinganayo. Oko kwathiwa, zonke izikolo ze-Ivy League, kunye nobuninzi beeyunivesithi zikarhulumente eziphakamileyo, iiyunivesithi ezizimeleyo kunye neekholeji zobungcali zifuna izikolo ukusuka kwi-SAT okanye UMTHETHO.
Zonke iikholeji ezikhethileyo ziyakwamkelwa ngokupheleleyo , ngoko ke imivo yakho ye-ACT iyingxenye enye kwi-equation equation. Imisebenzi yakho yesikhashana kunye nomsebenzi, inzame yesicelo, iincwadi zokucebisa, kwaye (ngokubalulekayo) irekodi yakho yemfundo ibalulekile. Amandla kule mimandla inokukunceda ukuhlawula amanqaku angaphantsi kwe-ACT, kodwa kwinqanaba elithile. Amathuba akho okufikelela kwisikolo esikhethiweyo esenza ukuba izikolo ezilinganiselweyo ziza kuncitshiswa kakhulu ukuba amanqaku akho angaphantsi kwesiqhelo sesikolo.
Ngoko yintoni eqhelekileyo kwizikolo ezahlukeneyo? Itheyibhile engezansi iveza idatha emele umviwo. I-25% yabanqaku beefowuni ngaphantsi kweenombolo eziphantsi kwetafile, kodwa amathuba akho okumkelwa ngokuthe ngqo aya kuba mkhulu kakhulu ukuba ngaba uya kufikelela kwi-50% ephakamileyo okanye ngaphezulu.
Isampula UMTHETHO WABANCEDI BESIKOLO KOLONI (50%)
Amherst 31 34 32 35 29 34
Ntsundu 31 34 32 35 29 34
UCarleton 29 33 - - - -
Columbia 31 35 32 35 30 35
Cornell 30 34 - - - -
Dartmouth 30 34 - - - -
IHarvard 32 35 33 35 31 35
MIT 33 35 33 35 34 36
Pomona 30 34 31 35 28 34
Princeton 32 35 32 35 31 35
EStanford 31 35 32 35 30 35
UC Berkeley 30 34 31 35 29 35
KwiYunivesithi yaseMichigan 29 33 30 34 28 34
U Penn 31 34 32 35 30 35
Yunivesithi yaseVirginia 29 33 29 34 27 33
Vanderbilt 32 35 33 35 31 35
Williams 31 34 32 35 29 34
Yale 31 35 - - - -
Bona ezinye izikolo kunye nolwazi olungaphezulu malunga neEMIT izikolo kule nqaku: Yintoni i-Good ACT Score?
Uphi na uMthetho?
UMTHETHO unikezwa kathathu ngonyaka: USeptemba, Oktobha, uDisemba, ngoFebhuwari, ngo-Epreli, noJuni.
Abafundi abaninzi bakhetha ukuba bathathe uviwo ngokukodwa kwiminyaka emininzi nangaphezulu ekuqaleni konyaka ophezulu. Funda kabanzi kula manqaku:
Xa Ufanele Uwuthathe UMTHETHO?
Izikolo ze-SAT kunye noMTHETHO Ukwazisa ukufakwa kwiikholeji zaseNew Hampshire
I-SAT Score Ukuthelekiswa kokungeniswa kwiikholeji zase-Iowa
UkuLondolozwa kokuPhezulu kwaphakathi
Usuku loPhayona ukuya kwiMormon
Ngaba Ndifanele ndifumane iSiqinisekiso soThengiso?
I Schiaparelli Mission
I-Free Simahla ye-Android yeDraw Apps Art
Ubaluleka be-US Presidential Primaries
Amanqaku angama-10 aphezulu kuMculo oMnye
Wonke uMndilili weNobel Prize kwiNcwadi
Yintoni Eyona Ntetho Ye-Epenthesis (Iimvumi zeLizwi)?
Iimpawu ze-Hippopotamus ezibalulekileyo
Iilwimi zesiTaliyane: iPiangere
Ukusebenzisa i-Torch Hot ukukhupha ii-Bolts